Belt Turntables drive
Turntables shandado Portable
> Us About
Recently Review for ujawaab
guide Best Belt Drive Turntables 2017-Buyer ee
guide Buyer ee - Best Hi-Fi Turntables 2017
guide Buyer ee - Best nostalgic Turntables 2017
Best shandado Portable Turntables guide 2017-Buyer ee
Raacsan: Barnaamijka Affiliate Amazon
Contact Info: Waxaad naga soo gaari karo iyadoo la isticmaalayo foomkan Contact.
ALL SAABSAN 10TURNTABLES
Sida aad arki karto, waxaa jira kala duwan oo badan oo turntables suuqa, Arbacada ah ama amazon. Laakiin sidee baad u qaado ka sida tiro balaadhan oo ah alaabta? Taasi waa su'aasha weyn. Dadka intooda badan u safraan suuqyada jumlada oo aanad garanayn sida ay u soo qaado waxa ay jecel yihiin iyo waxa ku habboon.
Turntable.com bixisaa aqoon baaxad weyn iyo macluumaad si aad ka heli kartaa ujawaab ah in adiga kugu habboon. Waxaa jirta odhaah in "Naftaada ku habboon in uu yahay muhiimada ugu, la mid ah sida aad doorato jaal dambiyada."
Waxaa jira afar nooc oo ujawaab si aad tixraac iyo sabab weyn waa in ay caawiyaan dadka doortaan waxa ay jecel yihiin oo kaliya ayaa bixiya ilo lagu kalsoonaan karo macluumaadka. Ka hor inta aadan soo qaado ujawaab ah noocyada kala duwan, in aad marka hore u baahan tahay si ay u fahmaan hawlaha iyo tayada ay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad iibsato turntables ama waxyaabaha Retro, ma seegi dib u eegista aasaasiga ah ee turntable.com. Waxay kaa caawinaysaa in heshiis weyn.
"Naftaada ku habboon in uu yahay muhiimada ugu, la mid ah sida aad doorato jaal dambiyada."
Latest blog caan